भण्डार अनुभवलाई आधुनिकीकरण गर्नका3कुञ्जीहरू ... र राजस्व | Martech Zone
यो सप्ताहन्त म नयाँ किनमेल गर्न गएँ क्रोजर बजार। साइड नोट ... यदि केवल क्रोजरले सोचे कि उनीहरूको अनलाइन उपस्थितिमा लगानी लगानी उनीहरूको खुद्रा उपस्थितिको रूपमा महत्त्वपूर्ण थियो। म digress। नयाँ बजार अघिल्लो क्रोजरबाट सडक पार गरी बनाइएको थियो। एक चरण भित्र र तपाईले यो देख्न सक्नुहुनेछ।
ताजा आर्टिसन रोटीसँग एक बेकरी, समर्पित गउरमेन्ट चिज काउन्टरको साथ डेली, एक स्टारबक्स, सुशी काउन्टर, र बच्चाहरू, खेलौना, शयनकक्ष, बाथरूम, गहना, र भान्साको लागि एक स्टप शपिंग। यो पनि एक क्याफेटेरिया र छुट्टी सेक्सन थियो। यो म्यामथ स्टोरसँग यो सबै छ। वा गर्छ?
जब म स्टोरबाट लुन्ड्री डिटर्जन्टको खोजी गर्दै थिएँ, मैले केही प्रभावकारिताहरू देखे। एउटा कुञ्जी यो छ कि चेक आउटको अगाडि रहेको सेक्सन स्टोर भित्र पसल जस्ता छ। केहि दूध र ताजा तरकारीहरू लिनु आवश्यक छ (स्थानीय रूपमा विकसित पनि)? तपाईं केहि मिनेटमा भित्र र बाहिर जान सक्नुहुन्छ। मेरो यात्राको लागि केहि घण्टा लाग्यो मैले पसलको हरेक कुनामा ध्यान दिएँ।
लुन्ड्री डिटर्जन्ट खोज्नका लागि, मैले एउटा स sign्केतमा खोज्नुपर्‍यो जसले मलाई गलियारे to to लाई दर्सायो। म पसलको त्यो कुनामा फर्किएँ, मेरो ज्वार उठायो, र परिधिमा हिंडें ... जहाँ सबै स्वस्थ, ताजा सामग्रीहरू छ मैले स्टारबक्स समातें, विश्राम लिएँ, र बाहिर जाँच भएँ।
भण्डारको अनुभवसँग उत्तम हुनुको दुई तिहाई तरीका थियो। मोकीबाट आएको इन्फोग्राफिक फोरेस्टरमा आधारित छ डिजिटल स्टोरको भविष्य। यसले एक अपवादात्मक आधुनिक इन-स्टोर अनुभवको लागि कुन तीन कुञ्जीहरू छन् भनेर मार्ग देखाउँदछ:
प्रासंगिक - मैले सोचें कि नयाँ सेक्सनहरू सही छन्। त्यहाँ चौराहेको अर्कोपट्टि वाल-मार्ट छ, तर अन्य सुविधाहरूको साथ किराना स्टोर भएकोले, क्रोजरले परिवारका लागि धेरै विस्तृत चयन प्रस्ताव गरे। तथ्य यो छ कि म एक नयाँ रिबन मैनबत्ती, एक उच्च-अन्त बर्नबोन, वा फ्राइ pan प्यान उठाउन सक्छ भनेर देखाउँदछ कि क्रोजरले आफ्ना ग्राहकहरूलाई बुझ्दछ।
प्रासंगिक - मौसमी र ​​सुविधा वर्गहरु शानदार छन्। म पुरानो Kroger मा कफी क्रेमर लिन को लागी प्रयोग गर्न को लागी प्रयोग गर्‍यो किनकि यो एकल खरीद को लागी सम्पूर्ण स्टोर मा यात्रा को आवश्यकता छ। म यसको सट्टामा स्थानीय सुविधा स्टोरमा जान्छु। अब म क्रोजरमा जान सक्छु र नयाँ ताजा सब्जी पनि लिन सक्छु!
व्यक्तिगत - यो त्यहाँ हो जहाँ क्रोजरका लागि उनीहरूको भण्डारमा अनुभव बढाउने अवसरहरू छन्। यदि तिनीहरूसँग नजिकको क्षेत्र संचारहरू मात्र छन् भने उनीहरूको मोबाइल अनुप्रयोगमा इम्बेड गरिएको छ, सायद केही इन-स्टोर बीकनहरू, र केही गतिशील प्रदर्शनहरू पुरानो-स्कूल ग्यास टेबल्सको सट्टामा म रिअल इस्टेटलाई कभर गर्नमा कम निराश हुन सक्छु। र, यदि मेरो प्लस कार्ड रेजिष्टर्ड छ, तिनीहरूले मलाई केहि प्रस्तावहरू पनि गर्न सक्दछन् जब म भण्डारमा जाँदैछु।
महान कुरा यो हो कि स्टोरलाई पुन: डिजाइन गर्नु आवश्यक पर्दैन - यो महाकाव्य स्टोर हो। व्यक्तिगत रूपमा, म स्टोरमा छरिएको केही आरामदायक कुर्सी र पलंगहरू हेर्न मन पराउँछु। अधिक व्यक्तिहरू ह्या hang्गआउट गर्दछन् - उनीहरूले किन किन्नु पर्छ भनेर उनीहरू सोच्दछन्। म स्टारबक्समा रोकेँ र फेरि गए र अर्को दर्जन वा त्यस्तै वस्तुहरू लिए।
यस भित्र प्रयोग भएको टेक्नोलोजीलाई माथि बढाएर क्रोजरले फाइदा लिन सक्दछ। मैले चेक आउट गर्दा, मेरो पछाडि ती महिलाले हावामा हाले कि मसँग एउटा सानो कार्ट रहेको छ जसको राशि ठूलो रकम थियो। उनले माही, वुडफोर्ड रिजर्भ, र स्यान्डलवुड रिबन मैनबत्ती मैले देखिन। मैले सोचेभन्दा दुई गुणा बढी खर्च गरे
म केवल कल्पना गर्न सक्छु यदि मेरो यात्रा भएको भए के खर्च गर्थें व्यक्तिगत!
टैग: स्टोरमाभण्डार अनुभवक्रोजरक्रोजर बजारखुद्राखुद्रा अनुभवस्टोर